Sina borosy nano avo lenta ho an'ny orinasa any an-trano sy mpanamboatra | Enyuan
Ny borosy nano dia borosy nify miaraka amin'ny toetra manokana namboarina tamin'ny alàlan'ny teknolojia nano-synthetic Manana ny mampiavaka azy ny fahaleovan-tena, ny hamafiny ary ny fahalemeny. Malemy kokoa sy matevina kokoa noho ny fitaovana nylon ny filamentan'ny borosy nify izy io ary miaro tsara kokoa ny siligaoma sy ny enamel.
anaran'ny vokatra borosy nano
Ny borosy nano dia manondro borosy nify miaraka amin'ny toetra manokana namboarina avy amin'ny teknolojia nano-synthesis. Ny teknolojia Nano-antibacterial sy ny fitaovan'ny nano-antibacterial dia afaka manakana ny fitomboan'ny bakteria marobe manimba eny ambonin'ny borosy nify mandritra ny fampiasana isan'andro, ka manasarotra ny fahaveloman'ny bakteria.
Ny teknolojia nano-antibacterial sy ny fitaovan'ny nano-antibacterial dia afaka manakana ny fitomboan'ny bakteria marobe manimba eny ambonin'ny borosy nify mandritra ny fampiasana isan'andro, ka manasarotra ny fiveloman'ny bakteria. Voninkazo mavitrika misy saribao misy diamondra, adsorption super sy decomposition, fahaiza-mando ny hamandoana, manampy amin'ny fihazonana ny borosy nify, hampihena ny fahafahan'ny fiterahana bakteria, hanala tasy, takelaka nify, nify salama sy fotsy.
2Ny volom-bovoka malefaka malefaka dia malefaka kokoa ary matevina kokoa noho ny nilona ara-nofo amin'ny filamenta borosy nify, ary miaro tsara kokoa ny siligaoma sy ny enamel. Ny fanorana ny siligaoma dia tsy mora ovaina ary tsy ho toy ny volom-borona miovaova. Aorian'ny fanovana, ny tariby mitsivalana dia hikorontana ary hanindrona ny siligaoma sy ny moka am-bava.
3Ny lohan'ny borosy malefaka sy ny volom-borona dia mampiasa teknolojia fandefasana indray mandeha, mamaky ny borosy nify nentim-paharazana miaraka amin'ny volo miloko, ary nohosorana, mba tsy hisy toerana hiafina ny bobongolo sy ny bakteria, miantoka ny fahadiovan'ny bakteria. Rehefa miborosy nify ianao dia hanadio ny firakotra amin'ny lela, hanala ny loto bebe kokoa, hanadio indroa ary hitondra fofonaina vaovao.
Previous: Borosy borosy nify boribory somary volo
Manaraka: borosy nify iray alina dia natao malefaka tsy maharary ny siligaoma